Ogaden News Agency (ONA) – Sacad Al-Xariiri oo Dalka Faransiiska Lagu Marti-qaaday.
Sacad Al-Xariiri oo Dalka Faransiiska Lagu Marti-qaaday.
Posted by ONA Admin	/ November 17, 2017
Dowlada Faransiiska ayaa marti qaad u dirtay Raysalwasaaraha Lubnaan Sacad Al-Xariiri oo dhawaan xilka iska casilay, waxaana casumaadaasi loo diray isaga iyo qoyskiisa oo hada ku nool dalka Sacuudiga.
Qoyska Al-Xariiri ayaa muddo dheer ku noolaa dalka Sacuudiga oo ay hanti ku leeyihiin, waxaana la rumeysan yahay in Boqortooyada Sacuudiga oo horey u taageeri jirtay Sunnida Lubnaan ay ku cadaadisay Al-xariiri inuu xilka isaga dego. Qaar kamid ah Xukuumada Raysalwasaare Al-Xariiri ayaa sheegaya in hogaamiyahooda xabsi guri ku yahay magaalada Riyadh, walow Sacuudiga uu beeniyey warkaasi.
Madaxweynaha Lubnaan Misheel Coon ayaa diiday inuu aqbalo iscasilaada Raysalwasaaraha isagoona codsaday in Al-Xariiriin dalkiisa lagu soo celiyo markaasna gaadho go’aan uu u madax banaan yahay. Faransiiska ayaa arrintan soo dhexgalay kadib markii Madaxweynaha France Macron uu safar kadis ah ku tagay 9-kii bishan magaalada Riyadh, si uu Boqortooyada Sacuudiga ugala hadlo xiisada Lubnaan iyo iscasilaada Al-Xariiri.
Dadaalka Faransiiska wado ayaan la ogayn in lagu guuleysan doono, casumada ay u fidiyeen reer Al-Xariiri ayaa ah isku daygii ugu danbeysay ee lagu doonayo in Al-Xariiri looga soo saaro wadankaasi Sacuudiga. Sacuudiga ayaa la sheegay inuu cadaadiska saaray Al-Xariiri kadib markii ay isku fikir ka noqon waayeen qaabka loo wajahayo kooxda Xisbullah ee awooda ku dhex leh dalka iyo dowlada Lubnaan, kooxdaasi oo ka qeyb qaadatay dagaalada ka socda wadanka Suuriya.